TOP Websaydhada Ugu Fiican Si Aad Ula Soo Soo Degto Tusaalooyinka Adobe InDesign Iyo Kheyraadka | Abuurista khadka tooska ah
TOP websaydhyada ugu wanaagsan ee laga soo dejisto sheybaarada iyo ilaha Adobe InDesign oo bilaash ah
Fran Marin | | Qalabka Naqshadeynta, Khayraadka
Waa mid kamid ah barnaamijyada ugu caansan uguna caansan ee laga isticmaalo guriga Adobe. Qaabeynta leh naqshadeynta Adobe waxay noqoneysaa hawl lagu farxo waxaanan heli karnaa natiijooyinka ugu wanaagsan ee aan kula shaqeyn karno heer xirfadeed. Dhawr jeer ayaanu samaynay iskudubarid kusaabsan ilaha ugufiican ee looga shaqeyn karo dhamaan noocyada mashaariicda ah. Xaqiiqdii waad booqatay midkoodna waxaadna awood u yeelatay inaad ku raaxaysato waxyaabo badan oo aad ugu isticmaali karto shaqadaada.
Maanta waxaan u sameyn doonnaa meel gaar ah qayb gaar ah, taas oo runti noqon doonin xulasho agab, laakiin halkii laga dooran lahaa bangiyada maaddada. Waxay u badan tahay inay kugu adag tahay inaad hesho qalabka shaqada ee ugu habboon shuruudaha mashruucaaga, marka waa muhiim inaad barato inaad hesho ilo wanaagsan. Maanta waxaan kaaga tagnay lix bog oo aadan iska indha tiri karin haddii aad naftaada u hurto adduunka qaabeynta in kasta oo dabcan aad iskaashi kala yeelan karto xulitaankan ka socda qaybta faallooyinka.
In kasta oo ay u baahan tahay diiwaangelin hore ee akoon bilaash ah (waxay qaadataa daqiiqad), degelkan ayaa ah ikhtiyaarka aan ugu jeclahay si aan u helo qaabab bilaash ah oo Indesign ah. Sababta way cadahay, waana tayada sare ee alaabada la bixiyo. Jaangooyada aan ka heli doonno boggan ayaa aad uga badan inta badan bogagga shabakadda ee ku takhasusay codsigan. Mar alla markii aan daalacano bangiga oo aan doorano shaxanka aan dooneyno, kaliya waa inaan soo dejisannaa. Markaan soo dejisanno alaabta, waxaan ka helnaa feyl aniga ii akhriya gudaha galka. Feylkan dhexdiisa xiriiriyeyaasha sawirrada loo adeegsaday jeesjeeskii asalka ahaa ama ilaha laga helay ayaa la cayimay, si aad u hesho natiijo isku mid ah tan la soo bandhigay. Qaar ka mid ah sidoo kale waxaa ku jira fiidiyoow gaaban oo hordhac u ah sixitaanka dukumintiga, wax bilowga ah ay hubaal tahay inuu yahay faahfaahin.
Tusaalooyinka InDesign ee ugu Fiican
Waa qaab isku dhafan oo bixiya suurtagalnimada helitaanka dhammaan noocyada agab ee loogu talagalay Adobe Indesign midkoodna qaab bilaash ah ama qaab caymis ah. In kasta oo xulashada bilaashka ah ay xadidan tahay, haddana waa mid tayo sare leh sidaa darteed waxaa habboon in la iska hubiyo. Waxyaabaha ay soo saarto ee bilaashka ah waxaad ka heli doontaa noocyo kala duwan oo kala duwan oo ka bilaabma buug-yaraha illaa waraaqaha, tusaalooyinka majaladda ama jadwalka taariikhda. Dhammaantood waxay diyaar u yihiin in loo tifaftiro qaab aad u macquul ah oo caadi ahaan daabacaadda ah, in kasta oo had iyo jeer lagu talinayo inaan taas ka xaqiijinno shirkadda daabacaadda.
In kasta oo tani ay tahay xul xul dhab ah, haddana waxaa habboon in la booqdo. Waa bangiga yar ee gaarka ah ee Angela W. Head. Haddii aan tagno aagga soo degsashada bilaashka ah waxaan ka heli doonnaa dhowr sheybaar xirfadeed iyo adeegsi fudud oo loogu talagalay Adobe Indesign. Qaar badan oo ka mid ahi waxay la yimaadaan isku dhafan midabyo kala duwan oo way daabacan yihiin oo ay ku jiraan dulinno, meel dhiig leh, iyo calaamado daabacan.
Naqshadeynta Bilaashka ah
Waxay qaadataa waqti in lagu quusto qaybtooda 'Indesign' oo ay ku jiraan bilaash si loo helo waxaad raadineysay, laakiin waxaa jira hanti badan oo la ogaado. Waxaa lagugula talinayaa haddii aad la shaqeysid Indesign inta badan, inaad booqato degelkan si joogto ah maxaa yeelay sidoo kale waxay leedahay dalabyo xiiso leh badanaa. Intaa waxaa dheer, halkan waxaa sidoo kale jira qalab loogu talagalay Adobe Photoshop iyo Illustrator sida sheybaarro tayo sare leh, noocyada iyo dulinka, walxaha sidoo kale loo isticmaali karo si fiican si loo hagaajiyo shaqadeena InDesign.
Boggan waa aalad internetka lagu abuuro laguna daabaco buugaagtaada iyo joornaaladaada. Si aad u soo degsato alaabada, waa inaad si toos ah ugu tagtaa qaybta kheyraadka oo aad doorataa Templates for Indesign CC option halkaas oo aad ka heli doontid qaabab fara badan oo kala duwan oo loogu talagalay buugaagta iyo joornaalada xirfadleyda ah. Mid kasta oo ka mid ah tusaalooyinkaas waa mid aad u fudud in la habeeyo. Waa degel dhammaystiran oo dhammaystiran oo sidoo kale bixiya suurtagalnimada isticmaalka software-ka Blurb ee u gaarka ah si loo abuuro naqshadahaaga.
Waxay leedahay noocyo kala duwan oo badan oo qaab ah oo bilaash ah oo diyaar u ah inay la shaqeeyaan iyaga. Ka mid ah dalabkeeda waxaan ka heleynaa nashqado loogu talagalay buugaag, joornaallo, buugaag iyo joornaallo elektiroonig ah. Markaad soo dejiso mid kasta oo ka mid ah tusaalooyinkooda waxaad isla markiiba ogaan doontaa tayada sare ee mid kasta oo ka mid ah iyo sida ay u fududahay la qabsiga mashaariicdaada, wax kastoo ay yihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » TOP websaydhyada ugu wanaagsan ee laga soo dejisto sheybaarada iyo ilaha Adobe InDesign oo bilaash ah
Bogagga TOP si aad u soo dejiso ilo bilaash ah oo loogu talagalay Adobe Illustrator
Websaydhada TOP si aad u soo dejiso sheybaarada Adobe After Effects oo bilaash ah